मलाई बचाउ । आफु बाँच
लामो समयको युद्धपछि आज म काम नलाग्ने बेकम्मा धूलो र पानी भएको छु । जिबाणु किटानुहरुसँगको मेरो युद्धको गाथा कुनै महाभारत भन्दा कम छैन । आज मेरो अस्तित्व त छ । तर मैले कसैलाई केही काम गर्न नसक्ने भाईसकेको छु । मेरो आफ्नो कुनै साख छैन । कुनै समयमा मेरो धेरै दुरुपयोग भएको थियो । आज त्यसको प्रतिफल भोग्दैछन् मनुस्य । मलाई एउटै कुरामा उदेक लाग्थ्यो कि मलाई बनाउन सक्ने बुद्धिभएको मनुस्य प्रजातिले मलाई चलाउन भने रत्तिभर जानेनन् । शायद मलाई चलाउने कडा कानुन बनाउन सकेनन् । त्यसैले त म जथाभाबी प्रयोगमा परे । जसले पनि प्रयोग गर्न सक्यो । मेरो ब्यापार गरेर मान्छेले अथाह कमाए । ........ओहो । म त छेउ नँ टुप्पो गन्थन गर्न पो लागेछु । मेरो उतपत्तिको कुरोबाट कथा आरम्भ गर्दा बेस हुन्छ होला ।
अहोरात्र खटेर मलाई जन्म दिने दिग्गजहरुमा मेरो सादर नमन छ। मलाई बनाउन त ब्रह्मजिलाई सृस्‍टि बनाउन भन्दा कठिन परेको जस्तो लाग्छ । दिमागका कोशीकाहरुलाई धेरै कसरत परेको थियो होला । अनिदा आँखा कत्ती राता भएका थिए होला । हजारौँ पटक मोलेक्युल नमिलेर एक्सपेरिमेन्ट फेल भएको थियो होला । कयौ दिनरातको प्रयासले मेरो जन्म भएको थियो । हो ,मेरो जन्मदाता त्यही सर्बश्रेस्ठ बुद्धीमान मनुश्य हो । जो सँग बिचार गर्न सक्ने सरदर १४०० ग्रामको कमलो ब्रैन खप्परभित्र सुरक्षित राखेर बस्ने सौभाग्य प्राप्त छ । बिचार त हो । सुबिचार र कुबिचार दुबै हुन्छन । केही मनुश्यको सुबिचारले म मनुस्यको कल्याण गर्नका लागि जन्मिए । ति सुबिचारले ओत्प्रोत मनुस्यलाई शब्दकोसले बैज्ञानीक भनेर चिनाउछ । जो आफ्नो जीवनको ऊत्तरार्धसम्म मेरो गुणस्तर बढाउने भागीरथ प्रयत्न गर्दागर्दै समाधिस्थ भए । जसले मलाई जन्माउने प्रकृयामा लामो प्रसब बेदना भोगेका थिए । आज त्यो प्रसब बेदनाको मुल्याङ्कन र महत्व नबुझेका मनुस्य देखेर मलाई सार्है पीर पर्छ ।
कुनै समयमा मनुस्य सार्है पीडित र त्रसित थिए । किटानुहरुले अनेक तरहबाट आक्रमण गरेका थिए । असन्ख्यक मनुश्य किसिमकिसिमका रोगले ग्रसित थिए । धेरैले ज्यान गुमाए । भाग्यमानि मात्रै रोगलाई परास्त गरेर बाँच्न सफल भए । त्यसबेला मेरो उत्पत्तिले मनुस्यलाई उर्जा दिएको थियो । कतिको ज्यान जोगियो त्यसको लेखाजोखा इतिहासले गर्ला । मेरो सदुपयोगले रोगका किटानुहरु परास्त हुँदै थिए । किटानुहरुको संसारमा बेस्सरी हल्लिखल्ली मचिएको थियो । अस्तित्वको संघर्ष नैसर्गिक गुण हुनुपर्छ । त्यसैले त रोगका किटानुहरु बलिया हुने जुक्ती निकाल्न थाले । मेरो मोलिक्युलको पहिचान गरेर प्रतिरोध गर्न थाले । जहाँ चाह हुन्छ त्यहाँ उपाय् निस्किन्छ । म बिस्तारै निस्प्रभाबी बन्न पुगे । किटानुहरुको आक्रमणले मनुस्यजाति थला परे । अनी मनुस्यले अझै शक्तिसाली बनाउन थाले मलाई । मेरा नयाँ रुप आउन थाले । मेरो बनावट परिवर्तन गरेर मलाई सुरक्षित बनाउन ध्याउन्नमा मनुस्यले परिश्रम गरे । मेरा नजिकका मिल्दाजुल्दा दाजुभाइको उत्पत्ती हुँदै गयो । एक प्रकारले भन्दा किटानु र मेरो प्रथम विश्वयुद्ध नै चलेको थियो । हामी एक आपसमा लुकामारी खेल्दै थियौ ।
मेरो प्रचार प्रसारमा लाखौं खर्च हुने हुनाले मेरो मूल्य उत्पादन गर्ने लागतभन्दा बढी हुन थाल्यो । त्यसको आर्थिक भार बिरामीमा सोझै पर्ने नै भयो । अरु कसलाई भार पर्थ्यो र ? अचम्मको कुरो त के भन्दा मलाई किन्दा आजसम्म कोही मान्छेले "डिस्काउन्ट" मागेनन । न त कपडा आदी किन्दा जस्तो बार्गेनिङ नै गरे । स्वभबत: बिरामी परेको मान्छेलाई आफु निको हुनसँग मतलब हुने भयो । मलाई फलानो दिनसम्म यति बिक्री गर्न सकियो भने यति बोनस र कमिसन पाउने प्रलभोनले मलाई रोगको अाधारमा भन्दापनि दामका अाधारमा भिडाउन थालियो। भिडाउन त भिडाएकै मान्नुपर्छ । किनकी मेरो ति रोगमा केही काम थिएन । मेरो प्रचार गर्न कम्पनिहरुले हेर्दा चिटिक्क देखिने टाइसुट लगाएका मिठो बोल्न सिकाइएका मनुस्य भर्ती गर्न थाले । तिनिहरुको काम भनेको डाक्टरलाई मेरा बारेमा गुणगान गाउने र पर्चामा लेख्न प्रेरित गर्ने थियो । एक हिसाबले भन्नुपर्दा सबैको दिमाग भुट्ने काम थियो भन्दा उपयुक्त हुन्छ कि ! मेरो कम्पनी अनुसारको नाम लेखिदिएबापत आकर्शक उपहार दिने प्रबन्ध मिलाउँदै गए । स्वाभाबिक लोभले मेरो नाम कम्पनी अनुसार लेखिन थाल्यो । मेरो गुणस्तर सबै कम्पनिको उस्तै रहेन । म गुणस्तरबिहिन हुँदै गए । केही गुणस्तरका कम्पनिले मेरो गुणस्तर कायम नराखेको होइन । तर ति कम्पनिको पहिचान गर्न बिरामीमा प्रयोग गरेर हेर्नु बाहेक कुनै उपाय भएन । सबै WHO भन्ने संस्थाबाट सर्टिफाइड् भएपछी कसरी थाहा पाउनु !
मेरो आफ्नै तागत हुदो हो त कतै नभेटिने गरी गायब हुने थिएँ कि जस्तो लाग्छ । मेरो उत्पत्तिभएकोमा आज ति कर्मठ बैज्ञानीकका आत्मा आसुले भिजेका होलान् । रोगको पहिचान गरेर मेरो सहि प्रयोग गर्ने सदबिचार भएका डाक्टरलाई मनुस्यले पत्याउन छाडे । उनिहरु पनि बिबस भएर मेरो कडा रुपको प्रयोग गर्न थाले। नगरे त हातमुख जोर्न गार्हो पर्ने भयो । बम पड्किदा सबै तहसनहस त हुन्छ । कोही कोही त बाच्ने पनि गर्छन् । त्यस्तै किटानुहरुको जगतमा बचेँका किटानुहरुले अफुलाई सुद्रिढ बनाउन लागे । त्यस्पछी त बलिया र अस्त्रसस्त्रले सुसज्जित किटानुहरु निस्केर आक्रमण गर्न लागे । एटम बमले ध्वस्त भएको जापानको धुलोबाट उदय भएजस्तै किटानुहरु उदाउन लागे । बिस्तारै त्यो नयाँ ट्रैनिङसहित लडाईंमा आएका किटानुहरुसँग मेरो जोर चल्न छाड्यो । लामो समयसम्म मेरो नयाँ मोलिक्युल निकाल्ने अन्वेषन नभएकोले मेरो पहिलेको अवस्थाले मनुस्यलाई रोगबाट जोगाउन धौधौ देखिन्छ । समयमा मेरो प्रयोग गर्ने उचित उपाय नखोजिएमा अहिले रहेको मेरो साख बिलिन हुने कुरामा कुनै दुबिधा छैन। ।